Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Ụgbọ elu EgyptAir laghachiri na Cairo ka achọtara ozi iyi egwu
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Crime • Akụkọ Na -agbasa n'Ijipt • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Akụkọ na -agbasa Russia • Safety • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Ụgbọ elu EgyptAir laghachiri na Cairo ka achọtara ozi iyi egwu.
Ụgbọ elu EgyptAir MS 729 alaghachila n'ọdụ ụgbọ elu Cairo n'ihi ozi egwu sitere n'aka onye amaghi ama hapụrụ n'otu oche ụgbọ elu.
Ụgbọ elu EgyptAir MS729 alaghachila n'ọdụ ụgbọ elu Cairo n'ihi ozi egwu sitere n'aka onye amaghi ama.
Ụgbọelu ahụ laghachiri n'ọdụ ụgbọ elu nke ọpụpụ nkeji iri abụọ na abụọ ka ụgbọ elu ahụ kwụsịrị wee rute n'enweghị nsogbu.
Ụgbọ elu ụgbọelu Airbus A220 nke si Cairo na-aga Moscow dara mkpumkpu n'osimiri Mediterenian.
Flightgbọ elu EgyptAir MS 729, si Cairo na-aga Moscow, Russia, manyere ịlaghachi n'ọdụ ụgbọ elu Cairo ka achọpụtara ozi na-eyi egwu n'otu oche dị na nnukwu ụlọ.
"Ụgbọ elu MS 729 alọtala n'ihi ozi egwu sitere n'aka onye amaghi ama hapụrụ n'otu oche ụgbọ elu," EgyptAir kwuru na nkwupụta.
"Ụgbọ elu ahụ laghachiri n'ọdụ ụgbọ elu nke ọpụpụ nkeji 22 ka e mesịrị wee rute n'enweghị nsogbu, a na-eme usoro niile dị mkpa."
Ụgbọ elu ndị njem Airbus A220 na-esi Cairo na-aga Moscow dara oti mkpu ihe dị ka ọkara elekere mgbe ọ gachara, ebe ọ nọ n'ofe Osimiri Mediterenian. Mgbe nke ahụ gasịrị, ụgbọ elu ahụ alaghachila n'ọdụ ụgbọ elu Cairo.
Dị ka akwụkwọ akụkọ ụgbọ elu si kwuo, ụdị ihe a na-eme ọtụtụ ugboro n'afọ. Dị ka a na-achị n'ozuzu, ozi ndị dị otú ahụ na-eme ka mmadụ bụrụ ihe efu.
Agbanyeghị, dị ka iwu nke ụgbọ elu si dị, ụgbọ elu ahụ ga-agbada n'ọnọdụ ọ bụla.
Mgbe ụgbọ elu ahụ rutere, a ga-enyocha nke ọma n'ụzọ kwekọrọ n'ụkpụrụ nchekwa, a ga-enyocha ndị njem na akpa ha, wee tinye ha n'ụgbọ elu ọzọ.